Chin State Invites EOIs for Shopping Mall, Motel | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance Chin State Invites EOIs for Shopping Mall, Motel
Chin State Invites EOIs for Shopping Mall, Motel
The Chin State government is inviting submission of Expressions of Interest (EOIs) for the development ofashopping mall and motel on four acres of land near Hakha City’s Myo Thit Quarter.
The project will be implemented under build-operate-transfer (BOT) scheme, according to U Vani Liang, head of the Chin State Municipal Committee’s engineering department,
“We will choose the proposal which offers the lowest cost withashort construction time by local investors,” said the official.
The EOI application period is November 29 – December 30. The bidding date will be announced thereafter.
The state, which remains one of the least developed in Myanmar and the recipient of the lowest amount of investment, offers land lease for up to 70 years as well as seven years of tax exemption by way of investment incentives.
Authorities consider Chin State to have tourism potential as it received over 16,900 local visitors and 2,400 foreign visitors last year. The state is home to Natma Mount National Park, Bontalar Waterfall, Resistance leader Cawn Bik’s native village, Rih lake and mountain ranges.
Chin State is part of the strategic Kaladan Multimodal Transit Transport Project involving Myanmar and India.
Shopping Mall နှင့် အဆင့်မြင့် Motelတည်ဆောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်အနီး မြေ(၄)ဧကပေါ်၌ မြို့အင်္ဂါရပ်နှင့်လျော်ညီမည့် Shopping Mall နှင့် အဆင့်မြင့် Motel တည်ဆောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာများကို တင်ပြနိုင်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယင်းစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် ချင်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့နှင့် Developer များ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး BOT စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်အင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးဗန်နီးလျန်းက ပြောသည်။
“ လာတင်တဲ့အထဲက ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း မြန်မြန်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံစံကို ရွေးချယ်သွားမှာပါ။ အဆိုပြုလွှာလက်ခံမှာကတော့ ဦးစားပေးအနေနဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်သီးသန့်ပဲ ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
စိတ်ပါဝင်စားမှု အဆိုပြုလျှောက်လွှာများကို နိုဝင်ဘာ(၂၉)ရက်မှ စတင်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ(၃၀)ရက် နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရန် ချင်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည်။ တင်သွင်းလာသောလျှောက်လွှာများကို ဖွင့်ဖောက်မည့်နေရက်နှင့်အချိန်ကို သီးခြားပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်သည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ပါဝင်ပြီး ယင်းဒေသ များ၌ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါက မြေငှားရမ်းခွင့် နှစ်(၇၀)အထက် ခွင့်ပြုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်မှုနည်းပါသော ချင်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ခုနှစ်နှစ် ပေးထားပြီး ချင်းပြည်နယ်သည် ခရီးသွားလုပ်ကိုင်ရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရှုမြင်ကြသည်။ ယမန်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးတွင် ချင်းပြည်နယ်သို့ပြည်တွင်းခရီးသွား ၁၆၉၀၀ကျော်နှင့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား ၂၄၀၀ ကျော် ဦးဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ချင်းပြည်နယ်ရှိ နတ်မတောင် အမျိုးသားဥယျာဉ် ၊ ဘုံတလာ ရေတံခွန် ၊ ဗိုလ်ကြွင်းဘိခ် မွေးဖွားရာ တာရွှန်းရွာ ၊ နာမည်ကျော် ရိဒ်ရေအိုင် နှင့် ကနေဒီ တောင်တန်းတို့သည် စိတ်ဝင်စားရာနေရာများအဖြစ် ချင်းပြည်နယ်တွင်ရှိနေသည်။
တဖက်တွင်လည်းကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံမဟာဗျူဟာကျသော ကုလားတန်ဘက်စုံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လည်း ချင်းပြည်နယ်သည်ပါဝင်နေသည်။ ယင်းစီမံကိန်းသည် မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယတို့အကြား ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းနှင့် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
Previous articleU.S. Objects to World Bank’s Lending Plans for China
Next articleHK Company to Invest $500 Million in Rakhine, Yangon Power Plants